Posted on December 17, 2015 by Qeerroo
Mudde 17,2015 Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FDG jabaachuun itti fufe Godina Wallagaa Bahaa Waamaa Hagalootti Warraaqsii daran jabaachuun itti Fufe, Guyyaa hardhaa Aanaa Waamaa Hagalootti warraaqsii finiina jira, uummatni Baadiyyaa fi Magaalaa hin Hafnee hunduu ba’ee falmachuu irratti argama. Godina Lixa Shaggar Aanaa Iluu Galaan Magaalaa Ijaajjii keessatti warraaqsii guyyoota Sadiif itti fufinsaan gaggeeffamaa jira. Magaalaan Ijaajjii Dirree waraanaatti jijjiramee jira.
Aanaa Midaa Qanyiitti Warraaqsii Uummataan jabaachuun hojjettootni mootummaa hundii hojii dhaabaan, Milishoonnii gandaa Uummataa waliin hiriiruun Mootummaa Wayyaanee Ganuun Uummatatti hidhannoo isaanii waliin harka kennatan , Mootummaan Wayyaanee Har’a Humna waraana Isaa guddaa konkolaataa 7 Fe’uun gara Aanaa Midaa Qanyiitti geessa utuu jiruu Daandii Konkolaataa Leencaa irraan jallatee Midaa geessuu bakka Goodaa Abbaa Caalaa jedhamuun Beekamutti uummatni riqicha kutuun waraanni wayyaanee karaa darbee Midaa seenuu dhabuun rakkacha jiru. Aanaa Calliyaa Magaalaa Gedoo fi Baabbichaa Humna Loltuu Makelakeya jedhamuun beekamuun qabamte ganama kana.
Kaayyoon Waraanni Wayyaanee Midaa Qanyiitti geeffamaa jiruuf hidhattoota gandaa fi poolisoota Meeshaa hiikachiisuuf waan ta’eef hidhattootni gandaa fi poolisootni of eeggannoo akka godhanii fi haala akkan ulfaatu kana keessatti meeshaa akka hin hiikkatne dhaamsii darbeefii qophiitti jiru.
Belachew Ibsa on December 17, 2015 at 1:01 pm said:
Akkam jirtu?? Ergaa gabaabduu tokkon isini dabarsa. Karaa Oromia times akka isin ga’u illee gaafadheera.
Innis maal isinitti fakkaate? Daandii kutuun Istrategy Qabsoo Oromoo keessaa isa tokko ta’eera. Bu’aan inni qabus guddaadha. Garuu, hangga ammaatti kan jiruu irra oolaa jiru, Shawwaa keessa gara lixaa fi Wolleggaa akkusumas, bakkoota murt’aan qofaatti.
Amma kanan isin yaadachiisuu barbaadu, daandiin boba’aan/Fuel gara Finfinnee/Biyyattiitti seenu hanga har’aatti hin cufamin/citin jira. Maaliif irratti hin jenne? Itti hin yaadne moo hin barbaachisu jettaniiti?
Kallattii bahaan daandiin Bottee rukutamuun faayidaa olaanaa qaba. 1) Rakkinni boba’aa yoo biyyattii keessatti uumame, Mootummatti kana umuriishee itti gabaabsa. Sochiin konkolaataa hafee kan balal’ia xiyyaaraa iyyuu kan dhaabuu dha. Kanaafuu, daandiin Botteen irra soch’ou haa kutamu. Rakkina maaliitu jira, Finfinneen Oromoon marsamtee jirti. Kan barbaachisu Morma ishee hudhuu qofa.
Fardis, Dirreenis Kunoo. Nagaatti